How'd it happen and more reports?: Lemon Law ခေါ် အချဉ် ဥပဒေ
ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူ အတွက်ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေလေးတွေပါ... ဆိုလိုတာက အရည်အသွေးမမှီတဲ့ ပစ္စည်းတွေနျင့် စားသုံးသူတွေကို အချဉ်ဖမ်းပြီးရောင်းတတ်တဲ့ သူတွေရဲ့ အန္တရယ်တွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေလေးပါ....
ပုံမှန် ဘယ်ပစ္စည်းဘဲ ၀ယ်ဝယ် အနည်းဆုံး ၆လ ဒါမှမဟုတ် ၁နှစ်၊ ၃နှစ် အာမခံပေးလေ့ရှိပါတယ်၊ အကယ်၍ မိမိလက်ထဲမှာ ၀ယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးပျက်သွားရင် ပြန်ပြင်ပေး ဒါမဟုတ် အသစ် ပြန်လဲပေး
ရမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ မိမိဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးက နဂိုမူရင်းအတိုင်းရှိရပါမယ်၊ ဘာမှပြုပြင်ထားခြင်းမရှိရပါဘူး၊
(iphone,ipad လိုမျိုးလဲ jailbreak လိုမျိုး လုပ်ထားရင်တော့ ပြန်လဲလို့မရဘူးနော်)၊ အလုပ်သမားပြဿနာ တွေလဲတိုင်ကြားလို့ရပြီး ဖြေရှင်းပေးပါတယ်၊ အောက်မှာ ဘယ်လိုပြဿနာလေးတွေ ရှင်းလို့ရလဲ ကြည့်လိုက်ကျပါအုံး.... ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁ရက်နေ့က စတင်အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ.....
စားသုံးသူတွေကို ဦးစားပေးနေတဲ့ စကာင်္ပူမှာလိုနိုင်ငံမျိုးမှာတောင် ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်နေမှာတော့ ဘာဆိုဘာမှာတာဝနခြင်းမရှိတဲ့ အမိမြေမှာ ဘယ်လိုလုပ်ကျမလဲ ?
ကြည့်လိုက်ကျပါအုံး ... နာမည်ကြီး Sim Lim Squae နှင့် People Park က ဆိုင်တွေ မှာတောင် ဒါတွေဖြစ်နေပါတယ်...... ဆက်သွယ်ရေးကုမ္မဏီကြီး M1, Sngtel, Starhub တွေဆို နှစ်တိ်ုင်း စားသုံးသူတွေနှင့် ပြဿနာတက်ပါတယ်.. နှစ်တိုင်း ပြဿနာပေါင်း ၂၀၀၀ကျော်မှာရှိတယ်လေ...
၂၀၀၅ ကနေ ၂၁၀၄ခုနှစ်ထိ ပြဿနာတွေကို ကြည့်လိုက်ကျပါအုံး.....
The Consumers Association of Singapore (CASE) isanon-profit, non-governmental organisation that is committed towards protecting consumers interest through information and education, and promoting an environment of fair and ethical trade practices. One of our key achievements is in advocating for the Consumer Protection (Fair Trading) Act (CPFTA) which came into effect on March 1, 2004.Fair Trading) Act (CPFTA) which came into effect on March 1, 2004
Check out our case studies for Septemberhere. Do you haveasimilar case? Drop usanote and let us know!
CONSUMER ALERT - TOP COMPLAINTS FILED WITH CASE AT SIM LIM SQUARE & PEOPLE'S PARK COMPLEX
Check out the latest update on the top complaints filed with CASE at Sim Lim Square and People's Park Complex this month.
CONSUMER ALERT - STAY SAFE FROM GAS LEAKAGES!
A gas explosion occurred inaresidential home at Taiwanafew days ago. Stay safe with the following tips.
CASE STATISTICS RELEASED FOR THE YEAR 2013
The Association had receivedatotal of 29254 complaints for the year 2013. Out of 29254 complaints, CASE has taken up1452 cases in the year 2013. As is the trend since 2010, in comparison to 2012, there were more assisted cases and fewer filed cases. This goes to show that consumers are getting more empowered and savvy in taking up their disputes with retailers after receivingawritten opinion from CASE.
The chart below shows the Top 10 categories
The top3common disputes received by CASE, in relation to the provision of services or product by the supplier, are as presented in Table 1 below:
Top3common disputes received by CASE
Electrical and electronics 2314
There were 100 cases resolved in the year 2013. This accounts toa68.49% resolve rate.
Top3industries that have been breaching the Act in 2013
Table4below presents the number of VCAs that have been voluntarily signed by businesses since 1 March 2004 to 31 December 2013. Table5presents the injunction/declaration proceedings that have been taken against the businesses in the same period.
(1 March 2004 - 31 December 2013)
VCAs entered into 8
Letter of Undertaking 8
Injunction/Declaration Proceedings 5
Pending Declaration/Injunction Proceedings as of 31 Dec 2013
Pending Declaration/Injunction Proceedings 1
Concord Developments Private Limited
Labels: ကုန်သွယ်ရေးသတင်း, လူထုအော်သံ, လူမှုရေး